पुजीवादी व्यवस्थामा जनसंगीतको यात्रा अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण (भिडियो)
नारायण शर्मा/ श्रावण १३, 2077
कहिलेसम्म बोक्ने होला थाप्लोमाथी ऋण
आउँदैनर झुल्केर यो धर्तीमा हाम्रो सुदिन ।
कस्तो बिडम्बना ! जसको जमिनको ठूलो हिस्सा छ, उ आफैँले त्यो जमिनमा पसिना चुहाउँदैन । जसले पसिना बगाइरहेको हुन्छ, उसको नाममा फेरि त्यो जमिन हुँदैन । भएको सानो जमिनको टुक्रामा हुने उब्जनीले जहान परिवारको भोक टार्न पुग्दैन । अनि विवस हुन्छन् उनीहरू साहु महाजनहरूसँग ऋण माग्न ।
थाप्लो माथिको ऋणको भारी कहिलेसम्म बोक्नुपर्ने हो ? के पसिना बगाउनेहरू ऋणको भारीबाट मुक्त हुने दिन कहिल्यै पनि आउन सक्दैन ? गरिब तथा दुःखी किसानहरू धेरैको मनमा सल्बलार्ई रहने प्रश्न हो यो । आफ्नो श्रम र पसिनाबाट मानव जातिलार्ई जीवित राख्न अन्नबाली उब्जाउने वर्ग किसान भने आफैँ दुःखी जीवन बिताइरहेको हुन्छ ।
केही महिनाअघि मात्र पूर्वी तराइका उखु किसानहरू काठमाडौंमा आएर उखु उत्पादनका लागि विभिन्न सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर उखु उत्पादन गरे पनि चिनी मिलका मालिकहरूले आफुहरूलार्ई दिनुपर्ने उखुको भुक्तानी नदिएको भन्दै आफ्नो कारूणिक ब्यथा पोखेका थिए । थाप्लोमाथि ऋणको भारी बोकेर जिन्दगी लतार्न बाध्य दुःखी किसानहरूको संख्या अत्याधिक छ हाम्रो देशमा । तिनै दुःखी किसानहरूको जिन्दगीको यथार्थ कथालार्ई मुख्य बिषयवस्तु समेटेर जनकलाकार लिला परियारको ‘ऋणको भारी’ बोलको नयाँ गीत आएको छ । गीतमा दुःखी किसानका बेदनालाई हुबहुँ रूपमा उतारिएको छ ।
पुस्तौदेखि बन्दगी छ सानो घरबारी
पाइँदैन र छाक टार्न यहि माटोमा हात बजारी ।
दुःखी गरिब किसानहरूले बर्षौदेखि भोग्नुपरेको यथार्थ बेदना हो यो । भएको सानो घरबारी पनि साहु महाजनकोमा बन्दगी राखेर आफ्ना जहान लाला बालाहरूको पेट पाल्न विवस छन् हाम्रो देशमा लाखौ किसानहरू । देशमा कैयौ सरकारहरू फेरिए, व्यवस्था नै फेरियो । तर उनीहरूको दुःख अहिले पनि उस्तै छ ।
उनीहरूको हित हुनेगरी देशमा नियम कानुन अझ बन्न सकेको छैन । राज्यबाट जुन रूपमा सेवा सुविधाहरू ती किसानहरूले पाउनुपर्ने हो, त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मानो रोपेर मुरी फलाउनुपर्ने बेलामा मल बिउको नपाएर छट्पटिइरहेका उनीहरूको अवस्था हामी सबैले देखिरहेकै छौं । त्यही मल बीउ खरिदमा पनि सरकारी मिलिमतोमै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको तथ्य छिपेको छैन । जनकलाकार लिला परियारको गीतले यही यथार्थ चित्रण गरेको छ ।
चारै तिर भ्रष्टाचारी नयाँ नयाँ भेषमा
हुँदैन र समृद्धि सुख शान्ति हाम्रो देशमा ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अहिले महारोगको रूपमा विकसित भइरहेको छ । कुनै यस्तो क्षेत्र बाँकी छैन, जहाँ भ्रस्टाचार नभएको होस् । कृषि क्षेत्र पनि त्यसबाट अछूतो छैन । देशका शासकहरू सुख र समृद्धिको नाराको रटान लगाइरहेका छन् । सुशासनको प्रवचन दिइरहेका छन् । तर व्यवहार ठिक उल्टो छ । ठग्ने, लुट्ने मान्छेहरू रूप बदलेर ठगिरहेका छन्, लुटिरहेका छन् । यो तरिकाले समृद्ध देश बन्न सक्ने छैन ।
गरिखाने मान्छेहरूको अवस्था झन–झन दयनीय र बसिखाने र ठगिखाने मान्छेहरूको अवस्था झन–झन सुदृढ हुँदै जाने यो असमान थिती देशमा रहेसम्म देश समृद्ध बन्न सक्ने छैन । गीतमा एकदमै सहि आशंका उठाइएको छ । भन्नेले त भन्दिएका छन् समृद्धि र समाजवादको यात्रामा देश हिडेको छ भनेर । तर जुन नीति, नियम र शैली बोकेर यो राज्य हिडिरहेको छ, यो तरिकाबाट समाजवादमा कदापि पुग्न सकिँदैन । गीतमा समस्याको उजागर मात्र होइन, सामाधानको उपाय पनि सुझाइएको छ ।
मुक्ती हुन्न हामी नै नजुटे
गरिब दुःखी जुरूक्कै नउठे ।
जुटाउ सबै पौरखी हात
मजदुर किसान मिलेर साथ साथ ।
रातो घाम पुर्वमा उदाउला
हासी खुशी मिलेर रमाउला ।
हो, किसानहरूको मुक्तिका लागि किसानहरू नै उठ्नुपर्छ । हामीलाई मुक्ति अरू कसैले ल्याइदिने होइन, त्यसका लागि हामी आफैँ जुट्नुपर्छ र एकताबद्ध भएर संघर्षको मैदानमा डट्नुपर्छ । गरिब दुःखी किसानहरू, मजदुरहरू सबैका पौरखी हातहरूलाई एकजुट पार्नुपर्छ । किसान र मजदुरहरू मिलेर त्यसरी आन्दोलन अघि बढाइयो भने बल्ल आफुलाई शक्तिशाली ठानिरहेका सत्तासिनहरू झुक्न बाध्य हुनेछन् ।
श्रमजीवी वर्गले सचेततापुर्वक त्यसरी आन्दोलन अघि बढाएपछि कयौं देशका तानाशाहहरू झुकेको प्रसस्त उदाहरणहरू छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । आज हामी जुन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बसिरहेका छौं, त्यो पनि जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनकै कारण प्राप्त भएको हो । किसान मजदुरको राज्य व्यवस्था पनि किसान मजदुरहरूले एकताबद्ध भएर लामो लडाइँ लडेपछि नै प्राप्त हुनेछ ।
किसान मजदुरलार्ई सचेत बन्न, आफ्ना बैरीहरू चिन्न केही समय लाग्ला । तर जब किसान मजदुरहरूले आफ्ना वर्ग बैरीलाई चिनेर तिनका बिरूद्ध सचेततापूर्वक दीर्घकालीन आन्दोलन अघि बढाउँछन्, तब त्यो आन्दोलनलार्ई रोक्न सक्ने तागत कसैसँग हुने छैन । त्यही आन्दोलनले नै जनताको वास्तविक सत्ता स्थापित गर्नेछ । अनि मात्र किसान मजदुर र श्रमजीवी वर्गका समस्याहरू सामाधान हुन सक्नेछन् । सबै सबै श्रमजीवीहरू हासी खुशी रमाउन सक्नेछन् । त्यसैले गरिब दुःखी किसानहरू अब त्यसप्रकारको आन्दोलनको तयारीमा जुट्नु पर्दछ । जनकलाकार लिला परियारको नयाँ गीत ‘ऋणको भारी’ ले मुलरूपमा त्यही सन्देश दिएको छ ।
यतिबेला बजार तीजका गीतहरूले बजार तातेको छ । यहि बेलामा यस्ता गीतहरूले त्यति बढी चर्चा नपाउन पनि सक्छन् । तर यस्ता प्रगतिशील रचनाहरूको महत्व तत्कालको चर्चालाई हेरेर गर्नु कदापि उचित हुने छैन । यो दीर्घकालीन महत्व बोकेको गीत हो । जनचेतनामूलक यस्ता सृजनाहरू देशमा बुर्जुवा व्यवस्था रहदाँसम्म कहिल्यै पूराना हुँदैनन ।
आजभन्दा करिव ४० वर्षअघि लेखिएका रक्तिमका संस्थापक अध्यक्ष जनगायक जीवन शर्माका गीतहरू आज पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक र चर्चित छन् । मुख्य कुरा निरन्तरताको हो । प्रगतिशील गीत/संगीतको कठिन यात्रामा सर्जक निरन्तर लागिरहेसम्म यस्ता गीतहरूले पनि स्थान र चर्चा पाइनै रहने छन् ।
यो पुँजीवादी व्यवस्था र समाजमा जनसंगीतको यात्रालाई अघि बढाउने कार्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि जनकलाकारले लामो समयदेखि जनसंगीतको यात्रालाई पछ्याइरहेका हुन्छन् । त्यही भएर पनि जनकलाकार जनताका कलाकार भएका छन् ।